काठमाडौं : एएफसी कप अन्तर्गतको प्रिलिमिनरी स्टेजमा भोलि त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले श्रीलंका पुलिस स्पोर्टिङ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। प्रतियोगिताको तयारीलाई लिएर आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले टिम तयारी अवस्थामा रहेको बताए। 'क्लब लाइसेन्स पाएदेखि नै हामीले तयारी सुरु गरेका थियौं। कीर्गिस्तानसँग पनि खेलियो। भोलिको म्याचलाई लिएर राम्रो तयारी भएको छ,' प्रशिक्षक…
फुटबलको माहोल बन्दै : नेपाल सुपर लिग भोलिदेखि, सुरु हुँदैछ कडा प्रतिस्पर्धा
वैशाख १०, काठमाण्डौ । नेपाल सुपर लिगको पहिलो संस्करण शनिबारबाट काठमाडौंमा सुरु हुने भएको छ । सात टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा शनिबार काठमाडौं रेजर्स र ललितपुर सिटी एफसी विच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसअघि शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको प्रि टुर्नामेन्ट पत्रकार सम्मेलनमा सबै टिमको प्रशिक्षक र कप्तानले आफ्नो तयारी राम्रो रहेको बताएका छन । […]
माधव नेपालसहित २० नेतालाई अन्तिम चेतावनीसहित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय
काठमाडौं, ६ बैशाख । नेकपा (एमाले) को आज बसेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले माधव नेपालसहित २० जना नेतालाई अन्तिम चेतावनीसहित स्पष्टीकरण सोधेको छ । यसअघि निलम्बनमा परेका नेता नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल र भीम रावललाई कारबाही गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तयारी छ । यसअघि यी चारै जना नेताले स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै उल्टै […]
धेरै नेपालीको दैनिकी चियाबाट सुरु हुन्छ । चिया नेपाली संस्कृति नै बनिसकेको छ । चिया तयार नपार्ने घर सायदै हुन्छ । कतिपयलाई त कैयौँ कप चिया पिउँदासमेत धित मर्दैन । जुन स्वस्थकर छैन । खाली पेट चिया पिउनाले त शरीरमा गम्भीर असरसमेत पुर्‍याउन सक्छ । यस्ता छन् खाली पेट चिया पिउनुका खतरा : १. कतिपयले चियासँगै दूध पनि खाइरहेको भन्दै यसलाई स्वस्थकर मान्छन् । तर, यसमा पूर्ण सत्यता छैन । खाली पेट दूधचिया पिउनाले शरीरलाई थकान महसुस गराउँछ । २. कतिपयले कम दूध राखेर चिया पिउने गरेका हुन्छन् । दूधचियाले असर पार्छ भन्...
काठमान्डाैं / त्रिभुवन आर्मी क्लब र किर्गिस्तानबीच आज दशरथ रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदैछ । एएफसी कप २०२१ प्ले अफको तयारीमा जुटेको नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब र किर्गिस्तानको यू–२३ टीमबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुन लागेको हो । त्रिभुवन आर्मीका जर्जप्रीन्स कार्कीको कप्तानीमा दिउँसो ३ः३० बजे हुने उक्त खेल रङ्गशाला पुग्ने जोसुकैले निःशुल्क हेर्न सक्ने... The post आर्मी क्लब र किर्गिस्तान टीमबीचको आजको फुटबल खेल निःशुल्क हेर्न पाइने appeared first on Purbeli News.
ओली समूहको मोटरसाइकल र्‍याली सुरु
काठमाडौं : नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रधामनमन्त्री ओली पक्षीय राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मोटरसाइकल र्‍याली निकालेको छ। नेकपा ओली समूहको वागमती प्रदेश कमिटीले शुक्रवार गर्ने आमसभाको पूर्व तयारीका लागि र्‍याली निकालेको हो। र्‍यालीका कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्रको यातायात व्यवस्था प्रभावित बनेको छ। र्‍यालीले बालकुमारी पुल, सातदोबाटो, लगनखेल, जाउलाखेल, थापाथली, जमल,…
नेपाली संगीत उद्योगमा पछिल्लो समय सबैभन्दा मन पराइएका सर्जक हुन् राजनराज सिवाकोटी । उनी गायन र संगीत भर्न पनि माहिर छन् । राजनराज संगीत विधाका तीनै क्षेत्रमा सक्षम छन्, सोही कारण उनी लोकप्रिय पनि छन् । उनले छोएका हरेकजसो गीत १ किसिमले चर्चामा आउँछन्, यूट्युबमा करोडभन्दा धेरै भ्युज आउँछ । सिवाकोटीले तयार पारेको ‘फुलबुट्टे सारी’ बोलको पछिल्लो गीत लोकप्रिय बन्यो । यसको मेल, फिमेल भर्सनका साथै चाइल्ड भर्सन समेत बनेको छ । सबै गीतले पाएका भ्युज असाध्यै लोभलाग्दा छन् । धेरै गायक, गीतकार, संगीतकारका लागि राज...
पहिला इन्ज्युरी, अनि ब्याटिङमा बाउन्ड्री : फाइदा खेललाई की खेलाडीलाई?
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट अन्तर्गत बुधवार सेमिफाइनल खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफबीचको खेल सम्पन्न भयो। जसमा एपीएफले पुलिसमाथि ३० रनको जित निकाल्दै फाइनलको यात्रा तय गर्‍यो। बुधवारको खेलमा दुई खेलाडी घाइते भए। पहिलो पुलिसका आरिफ शेख र दोस्रो एपीएफका भुवन कार्की। दुवै खेलाडीले खेलमा अलराउण्ड प्रदर्शन गरे…
धेरै नेपालीको दैनिकी चियाबाट सुरु हुन्छ । चिया नेपाली संस्कृति नै बनिसकेको छ । चिया तयार नपार्ने घर सायदै हुन्छ । कतिपयलाई त कैयौँ कप चिया पिउँदासमेत धित मर्दैन । जुन स्वस्थकर छैन । खाली पेट चिया पिउनाले त शरीरमा गम्भीर असरसमेत पुर्‍याउन सक्छ । यस्ता छन् खाली पेट चिया पिउनुका खतरा : १. कतिपयले चियासँगै दूध पनि खाइरहेको भन्दै यसलाई स्वस्थकर मान्छन् । तर, यसमा पूर्ण सत्यता छैन । खाली पेट दूधचिया पिउनाले शरीरलाई थकान महसुस गराउँछ । २. कतिपयले कम दूध राखेर चिया पिउने गरेका हुन्छन् । दूधचियाले अस...
धेरै नेपालीको दैनिकी चियाकफीबाट सुरु हुन्छ । चियाकफी नेपाली संस्कृति नै बनिसकेको छ । चिया तयार नपार्ने घर सायदै हुन्छ । कतिपयलाई त कैयौँ कप चिया पिउँदासमेत धित मर्दैन । जुन स्वस्थकर छैन । खाली पेट चिया पिउनाले त शरीरमा गम्भीर असरसमेत पुर्‍याउन सक्छ । यस्ता छन् खाली पेट चिया पिउनुका खतरा : १. कतिपयले चियासँगै दूध पनि खाइरहेको भन्दै यसलाई स्वस्थकर मान्छन् । तर, यसमा पूर्ण सत्यता छैन । खाली पेट दूधचिया पिउनाले शरीरलाई थकान महसुस गराउँछ । २. कतिपयले कम दूध राखेर चिया पिउने गरेका हुन्छन् । दूधचियाले असर प...
धेरै नेपालीको दैनिकी चियाबाट सुरु हुन्छ । चिया नेपाली संस्कृति नै बनिसकेको छ । चिया तयार नपार्ने घर सायदै हुन्छ । कतिपयलाई त कैयौँ कप चिया पिउँदासमेत धित मर्दैन । जुन स्वस्थकर छैन । खाली पेट चिया पिउनाले त शरीरमा गम्भीर असरसमेत पुर्‍याउन सक्छ । यस्ता छन् खाली पेट चिया पिउनुका खतरा : १. कतिपयले चियासँगै दूध पनि खाइरहेको भन्दै यसलाई स्वस्थकर मान्छन् । तर, यसमा पूर्ण सत्यता छैन । खाली पेट दूधचिया पिउनाले शरीरलाई थकान महसुस गराउँछ । २. कतिपयले कम दूध राखेर चिया पिउने गरेका हुन्छन् । दूधचियाले असर पार्छ भन्दै ...